Iingcamango Zegumbi | December 2021
Iingcamango ezi-17 ezigqwesileyo ze-DIY Wall Decor ngo-2021 - Ubugcisa be-DIY Wall
Ngaba ujonge imibono elula yokuhombisa udonga nge-DIY? Siqokelele obona bugcisa bodonga buhle be-DIY obunokuthi nabani na akwazi ukubenza.
Iingcaphuno ezingama-40 zeBhodi yeeNcwadi eziMnandi- iiNtetho zeBhodi yeeNcwadi eziDala
Iindaba ezimnandi! Ufumene ibhodi yeeleta. Kodwa ubhala ntoni kuyo? Nazi ezinye zeentetho ezihlekisayo zokupela.
Iingcamango ezingama-20 + zeCandelo eliHlukeneyo eliHlukeneyo-Isikrini sokusonga kunye neeNdawo zokuHombisa iiNgcebiso
Nokuba kukukhohlisa kobucala, ubuntu bokuhombisa, isisombululo esincinci sendawo, okanye ubume obucwangcisiweyo obulandelayo, size nezimvo ezingamashumi amabini nangaphezulu zokwahlula igumbi lokuhlwaya tp swoop in kwaye ugcine indawo yakho.
Izimvo ezingama-43 zoNyango oluLungileyo lweWindow- Ukugutyungelwa kweefestile, iiKhethini, kunye neeMfama
Nokuba ujonge imichako ebukekayo, amaxabiso agutyungelweyo, okanye ilaphu eliluhlaza elilula, sinezimvo zonyango ngefestile kwigumbi ngalinye endlwini.
Iingcamango zokulala ezi-17 eziBalaseleyo kwiGumbi lokuFikisa- Igumbi loLutsha eliPholileyo eliHombisa aMantombazana kunye naMakhwenkwe
Ngaba ufuna iingcamango kwigumbi lokulala lakho? Sifumene inkuthazo eninzi yokukunceda uhombise igumbi lolutsha abaya kulithanda ngokupheleleyo.
Iingcamango ezingama-25 zeKhenketho eziSitayile- Indlela yokuhombisa ikona
Ukulula, kulula, kunye nokuguqula, ukuhonjiswa kwekona yeyona nto iphambili kwigumbi lokucoca. Ezi zimvo ziyi-25 zekona zokuhombisa ziya kukunceda uthayiphe yonke intshi yekhaya lakho.
Izinto ezenziwayo kunye neeDon'ukukhetha unyango lwe Window
Unzima okanye ubunzima? Ixesha elide okanye elifutshane? Ingcali inobunzima kwindlela yokukhetha ezona ndlela zonyango zilungileyo zesithuba sakho.
Iingcamango ezi-15 eziPhambili zeWall Design Design -Indlela yokwenza udonga lweAccent
Iindonga ze-aksenti zinokutshintsha ngokwenene i-vibe ekhayeni lakho, kwaye ngokuqinisekileyo iya kuba ngcono. Emva kokubona uyilo lodonga olusisigxina, uya kufuna elinye kwigumbi elinye lendlu yakho.
Iiplani zePhuli zoMdibaniso oPhakathi ngaphakathi -Izimvo zePhuli zangaphakathi eziHlangayo
Le mizekelo ingama-22 mihle yoyilo lokuqubha lwangaphakathi kuqinisekisiwe ukwenza ukuba ungene ekhaya. Fumana ukhuthazo kwaye ubize ikhontraktha.
Isikhokelo kuLuhlobo ngalunye lweKhethini elinemifanekiso kunye nemizekelo
Ukusuka kwiipleyiti ezicujiweyo ukuya kwii-grommets, i-sheers ukuya kwi-blackout, jonga esi sikhokelo sakho sipheleleyo kuyo yonke into oyifunayo malunga neentlobo ezifanelekileyo zamakhethini.
Igumbi eli-18 laseRustic eliHombisa iiNdawo- Amagumbi aPholileyo
La magumbi e-rustic, ukusuka kumakhaya ekhitshi ukuya kumagumbi okulala asezintabeni, aya kukwenza uzive upholile.
Yeka ukuxhoma umabonwakude ngaphezulu kwendawo yakho yomlilo
Ngaba umntu uza kucinga ngeentamo?
Sibeke eyona ndlela yokuququzelela ifriji yakho ngamanyathelo asibhozo alula. Bukela isifundo sevidiyo emva koko uthenge zonke izinto zokugcina ifriji kunye nezixhobo zombutho ngaphambili.
Khuthazwa ngamagumbi aphezulu angama-16 ukuvula le nook incinci. Sinezimvo ezininzi zegumbi le-attic, ukusuka kumagumbi okulala abatyeleli ukuya kumagumbi okuhlambela ongezelelweyo kunye nokubuyela umva kombhali.
I-17 yeeMbono zeGym yasekhaya e-2021-Uyilo lweGym yasekhaya
Ukuba ucinga ngokuzivocavoca ekhaya, sukujonga phambili. Ezi zimvo zasekhaya zokuzivocavoca kulula ukuzikhupha kwaye zijongeka zipholile ngokwaneleyo ukuba zikukhuthaze ukuba uphume esofeni.
Iingcamango ezingama-24 zeGenius ezisezantsi zoGcino zokuzama
Nantsi indlela yokuguqula isiseko esingakhathalelwanga kwelinye lamagumbi asebenzayo endlwini.
Iingcamango ezili-12 zeShelfu eziDadayo - Izisombululo zoGcino olulula
Ukuba iindonga zakho zijongeka ngathi zilahlekile okanye ufuna nje isisombululo esitsha sokugcina, ezi zimvo zilishumi zinamathandathu zilungileyo nezinesitayile zokudada ziya kulungela ityala.
Iingcamango ezili-10 eziBalaseleyo zeGumbi lokulala-Iindawo eziPhezulu zokuthenga iiRugs zokulala kwi-Intanethi
Ukukhangela ityali entsha yokulala? Siqokelele inkuthazo kunye nendawo yokuthenga iiragi kwi-intanethi.
Iingcamango ezingama-23 ezisezantsi zeBar-Ifanitshala yeBhari yaseKhaya
Ezi zimvo zebar esezantsi zilungiso loyilo olifunayo. Kwaye zezona ndlela zilungileyo zokwenza ubungqina-ekhaya lakho ngesitayile.
Ukuhombisa ngeeMibono Iingcinga- Indlela yokuhombisa ngee Mirrors
Jonga izimvo ezili-10 ezizodwa zokuhombisa ngezipili- ukusuka kulungelelwaniso lwesitayile se-salon ukuxhoma ifestile.
imibala yokupenda igumbi lokuhlambela
izimvo zefanitshala zegumbi lokulala elingwevu
Iindleko zepete nelson zomthi